13 jailbreak tweaks ayo ave kuwanikwa muIOS 11 | IPhone nhau
13 jailbreak tweaks ikozvino inowanika muIOS 11
Semazuva ese, vakomana vanobva kuCupertino vanotsvaga kumwe kurudziro inodiwa kune yega yega vhezheni yeIOS mujeri. Kusanganisira mashandiro emamwe maCydia tweaks mune yega yega vhezheni yeIOS, Apple inoona kuti iwo mazano akanaka kwazvo, mazano anofambisa kusangana kwevashandisi neiyo inoshanda system yeiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Mushure mekuburitswa kweshanduro nyowani nyowani, vazhinji ndivo vashandisi vekuputsika kwejeri, vanotanga kutarisa kuti ndeapi ma tweaks uye mashandiro anowanikwa mu jailbreak ayo amhara mune ramangwana vhezheni yeIOS. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza iwo gumi nematatu mashandiro akabata pfungwa dzedu zvakanyanya.
1 Jailbreak tweaks yaisanganisira natively muIOS 11
1.1 Control Center kugadzirisa
1.2 Record chidzitiro zvakananga kubva mudziyo
1.3 Simbisa zvakakosha manotsi kubva kuNotes app
1.4 Bvisa data renhare
1.5 Shanduro yemutauro yakabatanidzwa naSiri
1.6 QR kodhi kuziva
1.7 Fambisa Kumba Screen Icons Pamwechete
1.8 Wona animated maGIF pane iyo pikicha reel
1.9 Night mode
1.10 Activate pasi simba muoti kubva Control Center
1.11 Imwe-ruoko khibhodi
1.12 Tongedza maitiro ekudzora AirPods
1.13 Kugadzirisa vhoriyamu HUD interface kana uchitamba mavhidhiyo
Jailbreak tweaks yaisanganisira natively muIOS 11
Control Center kugadzirisa
Chimwe chezvinhu zvakajairika zvevashandisi veIOS kwave kugona kugadzirisa zvese zvinhu zvinoonekwa muDare Rekudzora, kugona kuwedzera kana kubvisa izvo zvatisingashandise nguva dzose.
Record chidzitiro zvakananga kubva mudziyo
Kana isu taida kurekodha chidzitiro cheedu iPhone, iPad kana iPod touch, nzira chete yaibvira ndeyekushandisa iyo jailbreak isina kushandisa komputa, asi nekusvika kweIOS 11, Apple yaisanganisira iyi sarudzo natively kuburikidza neControl Center.
Simbisa zvakakosha manotsi kubva kuNotes app
Kunyangwe iwo manyorerwo ekushandisa ave nani kwazvo mumakore achangopfuura, kana isu tichida kuratidza katsamba pakati pevamwe, sarudzo chete yaive yekushandisa iyo jailbreak, asi nekuda kweIOS 11 hazvichadiwe.
Bvisa data renhare
Sezvandambotaura pamusoro apa, sarudzo zhinji dziripo pari zvino muControl Center yanga isingafadze vashandisi vazhinji, vashandisi vaida kukwanisa kudzima data kana vari munzvimbo ine chishoma chekuvhara kuitira kuchengetedza chishandiso bhatiri.
Shanduro yemutauro yakabatanidzwa naSiri
Sekureva kwaApple, Siri yakagamuchira nhau dzakakosha neIOS 11, asi iyo inogona kutipa iyo inonyanya kushandiswa ndiyo iyo inotibvumidza kushandisa yechitatu-bato yekuwedzera kududzira mitsara, kunyangwe Siri asingazviite zvakananga, asi ndizvo yatove nhanho kumberi mune izvi.
QR kodhi kuziva
IOS 11 kamera kamera sarudzo pakupedzisira dzinotipa isu mukana wekugona kumisikidza kuzivikanwa kweQR kodhi zvakananga kubva ku iPhone kamera pasina kuita chero chimwe chinhu.
Fambisa Kumba Screen Icons Pamwechete
Kana zvasvika pakuronga ma icon pazviratidziro zvekumba, kuzviita rimwe nerimwe kwagara kuri kunetsa, asi neIOS 11, Apple inotibvumidza kuti tizvironge pamwe chete.
Wona animated maGIF pane iyo pikicha reel
Apple yatora makore mazhinji kuti ikwanise kupa mukana wekutarisa mafaera eGIF fomati yakachengetwa pane yedu reel, asi sezviri kutaurwa neshoko, zvirinani kunonoka kupfuura nakare kose, uye neIOS 11 tinogona kutonakidzwa nazvo kuwedzera pakuvagovana.
Kunyangwe isiri iyo nzira yemanheru pachayo, iOS 11, kuburikidza neanogona kuita marongero, inoshandura ruvara rwemamenu kuita matema. Haisi kusangana kwakazara kwetweak, asi zvishoma zvinopa dombo.
Activate pasi simba muoti kubva Control Center
Dzimwe nhau huru idzo Apple yakateedzera kubva muhusungwa ndiyo mukana wekuwedzera iyo-yemagetsi-simba icon muDirect Center.
Apple zvishandiso zvine 5,5-inch screen, zvinoenderana nesaizi yemaoko atinawo, zvinotipa chinetso kana tikamanikidzwa kutaipa neruoko rumwe, asi nekuda kwekugona kwekutungamira iyo keyboard kuruboshwe kana kurudyi, dambudziko iri yakagadziriswa.
Tongedza maitiro ekudzora AirPods
Apple yazivisa muIOS 11 kugadziridzwa kwekubata kwatinopa kune maAirPods kuti atonge kana tichida kumisikidza Siri, kumbomira kana kutangazve kutamba, enda kuimba inotevera kana yapfuura kana kutomboadzima.
Kugadzirisa vhoriyamu HUD interface kana uchitamba mavhidhiyo
iOS 11 inozopedzisira yationesa vhoriyamu HUD pamusoro pechidzitiro panzvimbo pechinowanzoitika chinofaranuka chinogara mukati medu skrini. Ehezve, iyi sarudzo inongowanikwa chete kana tiri kutamba mavhidhiyo, kwete kana tiri pachiratidziro chekumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » 13 jailbreak tweaks ikozvino inowanika muIOS 11
Ndiri kutarisira iyo yepamutemo vhezheni yeIOS 11, chokwadi ndechekuti inoratidzika kunge yakanaka kwazvo.
Kunyangwe hazvo ndisiri mumwe wevaya vanopwanya jeri, ini ndoda kuongorora zvinogona kuitwa uye ma tweaks ayo.
Toca Lab: Elements, yemahara kwenguva shoma